HORDHAC: Tottenham vs Manchester City – Gool FM
Byare April 14, 2018
(England) 14 Abriil 2018. Manchester City oo si fool xun looga soo reebay Champions League ayaa eeganeysa guushii ugu horreysay kaddib saddex kulan maadaama ay labo jeer ku hor kuftay Liverpool halka marka kalena ay ka adkaatay Man United.
Tottenham oo hunguri kaga jiro kalinta saddexaad ee Premier League ayaa marti galin doonta hogaamiyayaasha horyaalka.
Daafaca garabka bidix ee Tottenham Danny Rose ayaa dhaawac kubka ah ku seegi doona kulanka.
Xiddiga reer England ayay dhibaatadu qabsatay kaddib markii uu 90-ka daqiiqo ciyaaray kulankii ay ka adkaadeen Stoke City, waxaase la filayaa inuusan waqti dheer ka maqnaan doonin garoomada.
Laacibka qadka dhexe ee Manchester City Fernandinho ayaa waxaa u bilaaban doonta labo kulan oo ganaax ah kaddib 10-jaale oo u ururtay.
Gool dhaliyaha ugu sarreeya kooxda Pep Guardiola Sergio Aguero ayaa dhaawac ku seegi doona kulanka halka uu sidoo kale maqnaan doono daafacooda John Stones.
Kulanka: Tottenham vs Man City (Premier League)
Goobta: Wembley Stadium
Garsoorka: Jon Moss (England)
◾Manchester City ayaa guul darreysatay labadii kulan ee ugu dambeeyay ay bannaanka kula soo ciyaarto Tottenham, lix gool ayaa laga xareeyay halka ay dhaliyeen labo gool oo qura, inkastoo labadaasi kulan lagu ciyaaray White Hart oo ma ahayn Wembley.
◾Man City ayaa 4-1 uga adkaatay Spurs bishii December, laakiin waa guusha kaliya ay ka gaareen shantii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka (3-guul darro iyo hal bar baro).
Safafka Macquulka ah ee Tottenham vs Manchester City:
HORDHAC: Southampton vs Chelsea